Indawo enelanga 2 - I-Airbnb
Indawo enelanga 2
Indawo entsha ehlaziywe ngokupheleleyo kumgangatho we-10TH kwisakhiwo esidala sama-comunist, i-2 elevators encinci kunye ne-kitchenette encinci Iindawo zokupaka zikawonkewonke ezijikeleze isakhiwo esitratweni 2 lei ngosuku lwerhafu yendawo Isikhululo seenqwelomoya yi-9- 12 imizuzu yokuqhuba i-5 euro / 25lei okanye ngeBus NO 9 ( 2.5 lei) kwisikhululo seeteksi ezingamisiyo ukuwela isitalato Uhambo olufutshane lokonwaba nokuba yiOld Town okanye Electroputere Mall , nonstop mini market kunye nokutya okukhawulezayo El Greco, ivenkile enkulu yaseCarefour bank ATM BRD kunye nendlu yokutshintshiselana
Le yindlu ehlaziywe ngokupheleleyo. Indawo yonke yeyendwendwe kuphela. Yonke into intsha kraca. Nceda uyiphathe ngokungathi likhaya lakho. Nceda usebenzise iindawo zokulala ozinikiweyo. Une-chicinete exhotyiswe ukuze ukwazi ukulungisa ukutya okulula ngomatshini wekofu isitovu sombane Une-cutlery, iipleyiti, ipani, imbiza kunye nesitya sesaladi okhoyo. Ikofu, iti, ityuwa yeswekile, ipepile iyancomeka endlwini.
I-air conditioner enamandla yokupholisa kunye nokufudumeza.
Umatshini wokuhlamba, ifriji encinci, imicrowave, umatshini wentsimbi, iihanger zempahla yakho. Isepha yesandla, isixhobo sokomisa iinwele kunye nezinto zokulala ziyafumaneka.
Amanzi ashushu kwishawa kunye nekhitshi.
I-wifi ekhawulezayo yasimahla kunye ne-TV yentambo enamajelo ayi-120.
Ibhedi ephindwe kabini yelinen entsha kunye neetawuli onazo kwaye ukuba uhlala ixesha elide unokufumana okungakumbi ngokwesicelo sakho. Kukho iivenkile ezithengisa ukutya ezijikeleze isakhiwo apho unokuthenga iziqhamo nemifuno emitsha. Indlu yokutshintshiselana ngemali yakho ikumgama wokuhamba ukusuka kwisakhiwo esisekhohlo
"ROTONDA" okanye "STOMATOLOGIE" ziziqhulo zeNdawo. Lo mmandla uyindawo yesibini eCraiova emva kwedolophu kumgama wokuhamba kuyo yonke into ebalulekileyo. Yonke into onokuthi uyifunele ukonwabisa ngumgama nje wokuhamba okanye imizuzu emi-5 ukukhwela iteksi okunokubiza eyona 2.5 Euros.
Kuthatha i-12 ukuya kwi-15 imizuzu ukuhamba uyonwabile okanye imizuzu emi-3 yokuqhuba iteksi ukuya edolophini ekwabizwa ngokuba “yiDolophu endala” enezibhari ezininzi, iindawo zokutyela kunye neeklabhu zasebusuku. I-Romania ayinaxesha lokuvala elinyanzelekileyo leebhari kwaye siyazingca ngaloo nto. Iiklabhu zasebusuku zingahlala zivuliwe kude kube yintsimbi yesi-7 ukuba inkampani ilungile. Unokuhlawula ngekhadi lakho letyala phantse kuyo yonke indawo kwaye ibhiya okanye i-cocktail inokubiza ukusuka kwi-1 ukuya kwi-2.50 yee-euro ukuya kwi-euro ezi-3 ubuninzi buxhomekeke kwindawo.
Ezinye zezona ndawo zintle zokutyela, imivalo kunye neeklabhu zasebusuku eCraiova zikumgama wokuhamba ujikeleze ibhloko yam efana neKasho, iOxygen, C House Milano, Crema, Atrium, Nunta Zamfirei, Rio, Wave 84, Krypton, Korona, Big Ben, Epoca. kwaye kunjalo uMc donald kunye noKFC. Sikwanayo nenkqubo yokupheka elungileyo apha apho unokuodola kuxhomekeke kwindawo yokutyela evela eTshayina, isiTaliyane kunye nesiRomania ukutya okuqhelekileyo kwaye ngokuqinisekileyo isimbo saseTaliyane senziwe ipizza.
Ukutya kubiza kakhulu eCraiova. Uninzi lweendawo zokutyela zibonelela ngexesha lemini imenyu epheleleyo kwaye ibandakanya iikhosi ezi-2 kunye nentlango / isiselo ngexabiso le-2 okanye i-3.5 euro. Ngobusuku ungakhetha nayiphi na indawo yokutyela kwaye nge-7 ukuya kwi-9 ye-euro nge-perosn ungafumana isidlo esimnandi kunye nesiselo. Isidlo sangokuhlwa ababini sinokuxabisa malunga ne-euro ezili-15 kwaye unokongeza umdiliya omnandi waseRomania. Kwakhona ukutya okukhawulezayo okanye ukutya kwasesitalatweni kuyafikeleleka kakhulu kwaye kutshiphu kakhulu kuphela i-euro ezi-3 kwi-Turkish/isisongelo sesiGrike umzekelo.
Unako kwakhona ukuya kumava okuthenga okuzonwabisa kwi-mall yeDolophu "ELECROPUTERE MALL" eneempawu ezidumileyo ezifana ne: Zara, Berska, U.S Polo, Pull and Bear, Starbucks Coffee kunye nokunye kunye nenkundla yokutya enkulu.
Kukho iimakethi ezi-2 ezingamisiyo kumgangatho osezantsi kwaye ivenkile enkulu “Carefour” ingaphaya kwesitrato ivula yonke imihla kude kube ngu-10 ebusuku. Imarike yeentyatyambo ikwangaphaya kwesitrato nje ukuba unokuyidinga, awusoze wazi;) Sine-ATM yebhanki ezi-3 (iGaranty kunye ne-BRD kunye ne-BCR) ukuze ukwazi ukwenza kwakhona imali.
Kukho kwakhona ikhemesti "AN-RA", ukutya okukhawulezayo okungapheliyo " EL GRECO" kunye nekhasino engapheliyo " MAXBET "ukuba nje. Kukho indlu yokutshintshiselana ngemali ekuhambeni umgama kwicala lasekhohlo njengoko uphuma kwisakhiwo. elinye lala mazwe asenazo iifama ze-Eco kunye neziqhamo kunye nemifuno zisesendalo ye-Eco friendly.
Nam ngokwam ndiyakuthanda ukuhamba kwaye ndiza kuba lapha ukuze ndincede xa kuyimfuneko. Ndisebenze kwinkonzo yabathengi ixesha elininzi lobomi bam. Ndiziqeshile ngoku, ndinobudlelwane kakhulu, ndisazi kakuhle isiNgesi kwaye ndikwazi ukuthetha isiTaliyane, iSpanish nesiFrentshi. Ndiyayazi idolophu kunye nazo zonke iindawo zayo ezingcono kakhulu. Ungasoloko undibuza imibuzo kwaye ndiza kukunceda kangangoko ndinako.
Nam ngokwam ndiyakuthanda ukuhamba kwaye ndiza kuba lapha ukuze ndincede xa kuyimfuneko. Ndisebenze kwinkonzo yabathengi ixesha elininzi lobomi bam. Ndiziqeshile ngoku, ndinobudlel…